30 38 39 40 Jump to page: Results 391 to 398 of 398
Thread: U.S.A rS jrefrmowif;rsm;
901 Courtney Rd, Baltimore, MD 21227 For more info contact Dr. Khin Rupa Maung at 443-604-0205, rupamaung@hotmail.com Dr.KhineKhineLwin at 510-366-1992, khinekhinelwin7@gmail.com Hepatitis B can be prevented withaHepatitis B Vaccination
Free Hepatitis B & C Screening Hepatitis B & C is known asasilent killer. Most people infected with Hepatitis B or Hepatitis C virus do not know they are infected because they have not been tested. Find out your hepatitis status and learn more about this preventable, treatable disease and how you can change the way it impacts your family and your community. Date: Sunday, March 10, 2013 Time: 1:30pm - 5:00 pm Location: Gospel Baptist Church 7012 Muncaster Mill Rd, Derwood, MD 20855 For more info contact Dr. Khin Rupa Maung at 443-604-0205, rupamaung@hotmail.com Dr.KhineKhineLwin at 510-366-1992 , khinekhinelwin7@gmail.com Hepatitis B can be prevented withaHepatitis B Vaccination Fortunately, HBV can be prevented withavery safe and effective vaccine. The Hepatitis B vaccine series is usually given as3shots duringa6-month period. The entire series is needed for long-term protection. We will provide free HBV vaccination atalater date if needed.
အသည်းရောင် အသားဝါ 'B' ပိုးနှင့် 'C' ပိုး သည် တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမားဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် အသားဝါ 'B' ပိုး နှင့် 'C' ပိုး ကူးစက်ခံရသော်လည်း၊ သွေးစစ်ဆေးမှုမပြုကြသဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တွင် ရောဂါပိုးရှိကြောင်း မသိရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ကိုယ်တွင် အသားဝါပိုး ရှိ မရှိ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ၄င်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကာကွယ်ပုံနှင့် ကုသနိုင်ရန် နည်းလမ်းများအား လေ့လာရန်နှင့် မိမိတို့မိသားစု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း အပေါ် အသားဝါပိုး၏ သက်ရောက်မှုအား သင်မည်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်မည်ကို လေ့လာရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ နေ့စွဲ တနင်္ဂနွေ မတ်လ (၁၀) ရက်, ၂၀၁၃
နေရာ Gospel Baptist Church လိပ်စာ 7012 Muncaster Mill Road, Derwood, MD 20855
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန်... 1. Dr. Khin Rupa Maung at 443-604-0205, rupamaung@hotmail.com 2. Dr. Khine Khine Lwin at 510-366-1992 , khinekhinelwin7@gmail.com အသားဝါ 'B' ပိုး အား အသားဝါ 'B' ပိုးကာကွယ်ဆေးဖြင့် ကာကွယ်၍ ရနိုင်ပါသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် အသားဝါ 'B' ပိုးအား ကာကွယ်ဆေးဖြင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးအား ၆ လအတွင်း (၃) ကြိမ်ထိုးရမည်။ (၃) ကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးလျှင် အချိန်ကာလ ကြာရှည်စွာ ကာကွယ်မှုရနိုင်သည်။ အကယ်၍ လိုအပ်လျှင် အသားဝါ ကာကွယ်ဆေးအား အခမဲ့ထိုးပေးမည် ဖြစ်သည်။
အသည်းရောင် အသားဝါ 'B' ပိုး နှင့် 'C' ပိုးရှိမရှိ အခမဲ့ သွေးစစ်ဆေးပေးခြင်း အသည်းရောင် အသားဝါ 'B' ပိုးနှင့် 'C' ပိုး သည် တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမားဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် အသားဝါ 'B' ပိုး နှင့် 'C' ပိုး ကူးစက်ခံရသော်လည်း၊ သွေးစစ်ဆေးမှုမပြုကြသဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တွင် ရောဂါပိုးရှိကြောင်း မသိရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ကိုယ်တွင် အသားဝါပိုး ရှိ မရှိ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်၊ ၄င်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ကာကွယ်ပုံနှင့် ကုသနိုင်ရန် နည်းလမ်းများအား လေ့လာရန်နှင့် မိမိတို့မိသားစု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း အပေါ် အသားဝါပိုး၏ သက်ရောက်မှုအား သင်မည်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်မည်ကို လေ့လာရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ နေ့စွဲ စနေနေ့ မတ်လ (၂၃) ရက်, ၂၀၁၃
နေရာ St Steven Lutheran Church လိပ်စာ 901 Courtney Rd, Baltimore, MD 21227
မြန်မာကောင်လေးတစ်ယောက် ဆုံးသွားပြန်တယ်.... သတင်းမှာ Dean က စင်္ကာပူကလို့ ပြောသွားတယ်.... http://www.nbclosangeles.com/news/lo...229634871.html
fingers crossed! Join Date Nov 2008
Posts 833	Thanks 18,249
NrefrmyghpydkUoufwrf;wdk;twGuf t&ifu a':vm100ay;&wmudk tck 25a':vmeJUvkyfay;r,fwJh/ aysmufqHk;'PfaMu;udkvnf; a':vm300uae 75usyfaNymif;aumufrSmwJh&Sif/ r*Fvmowif;ygyJ/ azaz:0g&D1&ufu paNymif;rSmygwJh/ 0g&SifwefoH&Hk;0ufbfqdk'frSm wifxm;wmawGUvdkufvdkUyg/ toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG7OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf